सन्तान नभएर तनावमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् शास्त्रका यी उपाय – Krazy NepaL
सन्तान नभएर तनावमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् शास्त्रका यी उपाय
March 12, 2021 682
काठमाडौँ । सबै आमा बुवालाई सन्तानको इच्छा हुन्छ नै। तर केही कारणले कुनै आमा बुवालाई सन्तान सुख प्राप्त हुँदैन।
यस्ता आमा बुवाले निरास नभइ केही तरिका अपनाउनु पर्छ। जसबाट सन्तान प्राप्तिको समस्या हट्न सक्छ।
जसको जन्म कुण्डलीमा राहु पाँचौं स्थानमा हुन्छ उनीहरुलाई सन्तान सुखमा समस्या हुन्छ। यो समस्याबाट छुटकारा पाउन मुख्य ढोकाको तलपट्टी चाँदीको पत्र बनाएर राख्नुस् त्यसबाट सन्तान हुने संभावना रहन्छ।
Prevजुनसुकै बेला आन्दोलनको आँधीबेरी आउन सक्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
Nextमहिना दिनमै पायल्स रोगबाट छुटकारा पाउन खानुहोस् मुला !
यो साता च’म्कि’दैछ ८ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् सा’प्ताहि’क रा’शिफ’ल
सु’त्ने बे’ला किन ब्रा खो’लेर सु’त्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जा’न्नै पर्ने !
काठमाडौंमा अब सहज हुँदै जिवन, जेठ २० वाट निषेधाज्ञाबीच यि सेवा खुकुलो बनाइने